DAAWO: ”Jubbaland waxay ka tirsan tahay Kenya!” – Aqoonyahanno Kenyan ah oo soo duubay muuqaal daandaansi ah – Puntlandtimes
May 19, 2019 Abdurahmaan Editor
Somalia waa na gumaysan rabtaa! Dhallinyaro Kenyan ah oo dhigtajaamacadda Fort Hall College iyo Prefosor-kooda, ayaa Youtube soo dhigay muuqaal ay halku dheguga dhigeen inaysan bixinaynin wax ay ku sheegeen in yar oo ”dhulkooda ka mid ah”, iyagoo ulajeeda dhul-badeedka ay sheeganayaan ee Somalia oo ay ku tilmaameen ”Al Shabaab iyo burcadbadeed.”
Waxay sidii caadada ahayd ku celceliyeen inay Somalia abaal u galeen, qaxootigeeda qaabileen,meelo ay ku ganacsadaan siiyeen iyo tan ugu daran oo ah inay ”Somalia nabadeeyeen!”
Waxaa se ugu darrayd markii ay sheegeen in aanay sina u aqbali doonin go’aan kasta oo kasoo baxaMaxkamadda Caalamiga ah ee ICJ oo ay sheegeen inuu ka taliyo nin Soomaali ah, intaana kumaharine waxay sheegteen gobolka Jubbaland ee koonfurta Somalia, wax loo arkay riyo maalmeed soojeed ah.
”Kenya waa inay dalbataa ”soo celinta” Jubbaland, waayo Somalia waa diiddey inay aqoonsatoxuduuddii 1924-kii oo ku dhacay heshiis dhex maray Italy iyo Britain.” ayay tiri gabar ka tirsandhallinyaradan oo ku doodday in maadaama aysan Somalia aqoonsanayn xad beenaadka u dhexeeyalabada dal aanu ansax ahayn heshiiskaasi ”Somalia lagu siiyay Jubbaland”, sida ay ku doodday.
Muuqaalkan oo lagu tilmaami karo hadaaq aan ku dhisnayn wax ka badan riyo ayaa iska hor imanayawaayo marna waxay sheegayaan in la ixtiraamo heshiis uu gumaysigu galay marna waxaysheegayaan inaysan ixtiraamaynin Maxkamadda ICJ maadaama uu ”gumaystuhu samaystay.
”Somalia ayaa ku jira xilli ay cadowyo badan usoo malabsanayaan, iyadoo ay xitaa hawaysanayaan dalal aan abid ku dhicin sida Kenya, waxaana dhibku ka taagan yahay Somalia oo laga la’yahay siyaasad dhinac isu raacsan, iyadoo ay wax kasta doodi ka taagan tahay xitaa Xajkii iyowaxbarashadii oo la siyaasadeeynayo, waana arrin kaliya caawinaysa qadiyaadka cadowga dalka iyodanihiisa oo ay farsamo ahaan si cad uga soo horjeedaan rag badan oo haatan ku jira siyaasadda Somalia
1.Waan idin soo dhaweeynay iyo dhulkiinaan qaar qadanaynaa ma aha labo iskeeni kara.Haah oo kenya na so dhaweeysay.Laakiin dhulka iyo dadka ay kenya sheegato baan wax ku leenahay ee taas kenya ha ogaato.Anaguba kenya waan soo dhaweeynay oo waxaan u keenay dhaqaalo badan oo aysan waligood helin.Dadka reer kenya waxan baray waxyaalo badan oo aysan waligood ku fakarin oo ay ka mid yahiin ganacsi aysan aqoon.Boqolaal qof baan u shaqaalaysiinayn oo an waligood shaqo u kalahin.Kumaakun guri baan ka ijaaranay oo ay ka heleen dhaqaalo aysan waligood helin.
2.Haddii ay kenya istiri ka faa’iidaysta bur-burka soomaaliya oo ka qaata dhulkooda intaad rabtaan taasi waa mid qaldan oo an suuroobayn marna.Kenya xoog iyo xeel midna dhulka soomaaliya kuma qaadan karto.Waayihii ay soomaaliya dawlada ahayd kenya ma oran jirin dhulbaa soomaaliya nooga maqan ee soomaali baa oran jirtey kenya dhulbaa Ingiriis naga siiyey ee Insha Allaah waa in dhulkaas one day la so dhiciyaa.Calaa kulli xaal dadka reer kenya iyo dawlada kenyaba ha hagaajiyen daris wanaaga.Kenya ayadaa 2005 jeexatay map been abuur ah oo ay ayadu qoratay una shaqayn waah.
Intiii caqli leh waligood wey filayeen in waxaan oo kale dhici doonaan. Hada,.. dad dhalinyaro ah ayaa hamigaan dhulka somaaliyeed lagu sheeganayo soo jeedisay, lakiin mar aan fogeeyn ha la filo madaxda keenya u saraysa oo hadaladaan oo kale ku hadlaysa. Run hadii laga hadlayo jubaland kenya ayey gacanta ugu jidhaa. Cid ka bixin kadhana ma jiraan.
Hadii aanu nahay somali waa in aanu isu diyaarinaa sidii anu u noqon lahayn gun fiican oo adeeca oo hadana cagaha ka shumiya gumeysteyaashooda. Sidaas kaliya ayaa dhici kadha in haraaga nagasoo hara ay qarniga dhambe ku gaaraan.
Dhaman wadanka somaliya wa in laqabsado kenya xaq ayey uledahay in aay wax ka bobto dhulka somaliya oo laka bobayo.haday somaliya ku heshin weyday dhulkedi cidkadta xubin kasta ha ka gosato.
Qof kasta oo somali ah oo somaliya ku sugan waxa haysta dhibato kala duwan,1aad amaan mahaysto,cafimad mahaysto.biyo mahaysto
Cunto mahaysto.dawo iyo Dr.mahasto
Sharci mahasto.wax xuquq ah malaha.maxay tahatahay nolasha somaliya.